Om du behöver redovisa sökta jobb - Arbetsförmedlingen
/ Om du behöver redovisa sökta jobb
Haddii aad tahay bilaa shaqo oo aad qaadato nooc ah gunno waxaanu mararka qaarkood kaa codsan karnaa caddayn muujinaysa inaad raadisay shaqooyinka aad ku soo bandhigtay warbixinta hawlahaaga.
Sidan ayay tani u dhacdaa
Haddii laguu doortay kantarloolid waxaad naga helaysaa warqad ay la socoto foomka ka jawaabida. Foomka jawaabida ayaad ka arkaysaa kuwa ay yihiin shaqooyinka ay tahay inaad caddayso inaad raadisay. Adigu waxaad ku caddayn kartaa inaad raadisay shaqo aad soo bandhigtay iyadoo aad noo soo dirto tusaale ahaan:
dukumenti caddaynaya inaad raadisay shaqadan, tusaale ahaan jawaab aad ka heshay shaqo-bixiyaha taas oo caddaynaysa inaad raadisay shaqadan, ama caddayn kale oo muujinaysa in shaqo-bixiyuhu kaa gudoomay codsiga aad u dirtay
sawir moobilka ama kambiyuutarka lagu qaaday ahna xaqiijinta inaad raadisay shaqadan.
Keydi dukumentiga caddaynaya inaad codsatay shaqo aad soo bandhigayso ugu yaraan saddex bilood.
Maxaa dhacaya haddii adigu aanad soo jawaabin?
Haddii aanad wakhtigi loogu talogalay ku soo dirin foomka jawaabta oo aad soo buuxisay ama haddii aanad caddayn karin inaad codsatay shaqooyinka aad ku soo bandhigtay wargelinta hawlaha, markaasi waxay tani raad ku yeelan kartaa xaqa aad u leedahay gunno.
Haddii aad ka qayb-qaadato barnaamij shaqo ama hawl markaasi waa Xafiiska Shaqada kuwa baaraya xaqa loo leeyahay gunno. Haddii aad gunno ka hesho qasnada shaqo la’aanta waxaa Xafiiska Shaqadu wargelin karaa qasnada shaqo la’aanta, taas ayaa baarahaysa xaqa loo leeyahay gunno.